admin Aug. 3, 2016, 7:34 a.m. 875
Sideen uga mid naqan karaa hal qaran?
Waxa aad iska diiwaangelin kartaa bogga rasmiga ah ee Hal Qaran adigoo galaya bogga Xubinnimada ee Hal Qaran.
Waa maxay talaabooyinka loo marayo diiwaangelinta?
Si loo xaqiijiyo in dadka isdiiwaangelinayo ay yihiin dad sax ah oo isticmaalayo email sax ah, waxa aan isdiiwaangelinta ku xirnay in qofka uu helo email xaqiijin ah kadibna email-kaas uu isticmaalo. Waxaa laga yaabaa in fariinta Inbox-ka aad ka weyso, waxaad ka raadin kartaa Junk ama Spam.
Hadii aad weyso fariinta waxaad si toos ah email noogu soo diri kartaa info@halqaran.org adigoo soo qoraya magaca aad isku diiwaangelisay si aan kaaga caawino dhameystirka isdiiwaangelinta.
Hal Qaran Maxay dooneysaa?
Dhaq-dhaqaaqa Hal Qaran waxa uu u halgamayaa nabad ku soo dabaalidda dalka, dib u heshiisiinta umadda iyo horumarinta dhinacyada kala ah midnimada, amaanka, maamul wanaaga, dhaqaalaha, waxbarshada, caafimaadka iyo Cadaaladda. Dhaq-dhaqaaqa waxa uu dadaal joogto ah ku bixinayaa sidii loo gaari lahaa dawlad wanaag, furfur-naan, hufnaan, is ixtiraam iyo isla xisaabtan u dhaxeeysa bulshada ,maamul goboleydyada iyo dowlada faderaalka.
Hal Qaran Maxayna Aheyn oo loo baahan yahay in aan lagu qaldin?
Hal Qaran ma aha xisbi siyaasi ah, ma aha dhaqdhaqaaq qabiil ama ka shaqeeya dano gaar ah. Hal Qaran waa waa madal kulmineysa dadka doonaya in wadan uu ka hana qaado isbedel caafimaad leh.
Dhaqdhaqaaqa Hal Qaran muxuu aaminsan yahay?
Hal Qaran waxa ay aaminsan tahay in baahi loo qabo hogaan aragti fog leh, caadil ah lehna karti iyo aqoon keeni karta isbedel iyo hanaan looga samata bixi karo dhibaatada dalka ragaadisay. Soomaaliya waxaa ay dib ugu hanan kartaa dowladnimadeeda marka umadda Soomaaliyeed si toos ah looga qayb-galiyo da’daalada dib loogu nooleeynayo owladnimadda Soomaaliya.
Xafiisyada Hal Qaran halkey ku yaalaan?
Xarunta dhaxe ee Dhaq-dhaqaaqa Hal Qaran waxa ay ku taalaa Magaalada Muqdisho, waxa uuna xarumo kale ku leeyahay gobolada dalka iyo wadamada ay ku nool yihiin jaaliyadaha umadda Soomaali-yeed.
Maxaa la iiga baahan yahay hadii aan aaminsanahay fekerka Hal Qaran?
Hadii aad aaminsan tahay fekerkeena oo aad dooneyso inaad ka qeyb qaadato, waxaad uga qeyb qaadan kartaa siyaalaha soo socdo:
1) Inaad xubin ka noqoto dhaqdhaqaaqa adigoo iska diiwaangelineyso boggan
2) In aad asxaabtaada la wadaagto fariimaha Hal Qaran adigoo adeegsanayo baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter iwm.
3) In aad kusoo xirto dadka kula midka ah inay qeyb ka noqdaan Hal Qaran.
4) In aad cidna ka sugin horumarinta iyo u adeega dalkaaga.